ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ CHF, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ဆွစ်ဖရန့်, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း Catalog ဘဏ်များ
မြို့ကို Select လုပ်ပါ ▼
ငွေလဲနှုန်း MMK — CHF ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ဆွစ်ဖရန့်, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
1,00 MMK မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ
0,00 CHF ဆွစ်ဖရန့်
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/CHF ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 01:54
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и ဆွစ်ဖရန့် (CHF). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 01:54.
မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို MMK) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် မြန်မာ.
ဆွစ်ဖရန့် (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို CHF) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ, လိုက်တင်ရှတိုင်း.
ရက်စွဲ 25.10.2020 01:54
ငွေကြေးက ISO code ကို MMK
အနု Pya (1/100)
ဒင်္ဂါးပြား 1, 5, 10, 50, 100 MMK
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 MMK
နိဒါန်း၏တစ်နှစ်တာ 1952 ခုနှစ်
1 1 423,60
57118,02
10 14 236,04
50 71 180,19
100 142 360,37
200 284 720,75
500 711 801,87
1000 1 423 603,73
20002847 207,46
50007118 018,66
10000 14 236 037,32
20000 28 472 074,64
50000 71 180 186,60
ငွေကြေးက ISO code ကို CHF
အထိမ်းအမှတ် ₣ • Fr • sFr
အနု Santim (fr.), Rapen (d.), Chentezimo (ital.) (1/100)
ဒင်္ဂါးပြား 5, 10, 20 Santims, 1/2, 1,2နှင့်5CHF
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 10, 20, 50, 100, 200 နှင့် 1000 CHF
MMK (Кьят Мьянма) → USD (Американский доллар) MMK (Кьят Мьянма) → EUR (Евро) MMK (Кьят Мьянма) → GBP (Британский фунт стерлингов) MMK (Кьят Мьянма) → JPY (Японская иена) MMK (Кьят Мьянма) → CHF (Швейцарский франк) MMK (Кьят Мьянма) → AUD (Австралийский доллар) MMK (Кьят Мьянма) → CAD (Канадский доллар) MMK (Кьят Мьянма) → DKK (Датская Крона) MMK (Кьят Мьянма) → NOK (Норвежская крона) MMK (Кьят Мьянма) → NZD (Новозеландец) MMK (Кьят Мьянма) → SGD (Сингапурский доллар) MMK (Кьят Мьянма) → ILS (Новый израильский шекель) MMK (Кьят Мьянма) → PLN (Польский злотый) MMK (Кьят Мьянма) → BRL (Бразильский реал) MMK (Кьят Мьянма) → KRW (Южно-корейская вона) MMK (Кьят Мьянма) → MXN (Мексиканский песо) MMK (Кьят Мьянма) → SAR (Саудовский риал) MMK (Кьят Мьянма) → TRY (Турецкая лира) MMK (Кьят Мьянма) → SEK (Шведская крона) MMK (Кьят Мьянма) → ZAR (Южноафриканский рэнд) MMK (Кьят Мьянма) → AED (Объединенные Арабские Эмираты Дирхам) MMK (Кьят Мьянма) → THB (Тайский бат) MMK (Кьят Мьянма) → CNY (Китайский юань) MMK (Кьят Мьянма) → KZT (Казахстанский тенге)
ဒီစာမျက်နှာ Link ကို:
ဒီစာမျက်နှာက Short link ကို။ သငျသညျလညျး, ဒီလိုလုပ်ဖို့, လူမှုရေးကွန်ရက်များကိုရည်ညွှန်းမျှဝေရိုးရိုးဝက်ဘ်ဆိုက်၏အပေါ်ဆုံး Menu ထဲမှာ icon ကို click နိုင်ပါတယ်။
HTML ကို-code ကို:
သင့်ရဲ့ website မှာသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်လင့်ခ်အဖြစ်ထူထောင်ရန်ဤ code ကိုသုံးပါ။ အိမ်နီးချင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုသာအကျဉ်းချုပ်ရည်ညွှန်းသုံးစွဲဖို့လုံလောက်သောလူမှုကွန်ယက်များအဘို့။
နေအိမ် ငွေလဲနှုန်း Catalog ဘဏ်များ
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0457 s.
မြို့ကို Select လုပ်ပါ
ရန်ကုန် မန္တလေး ပုသိမ် မန္တလေး ချမ်း​မြ​သာ​စည် လေဆိပ် မြန်မာ
-Norfolk	Aland ကျွန်းစု	Anguilla	Antigua နှင့် Barbuda	Antilles	Aruba	Bermuda	Bouvet	British Virgin Islands	Burkina Faso	Butane	Guadeloupe	Guernsey	Mauritania	Mayotte	Micronesia	Nauru ကျွန်း	Palau	Pitcairn-	Puerto Rico	Salvador	seychelles	Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayen	Tuvalu	US Virgin Islands	VC	Wallis ဟာနှင့် Futuna-ကျွန်းစု	ကင်ညာ	ကင်မရွန်း	ကနေဒါ	ကမ္ဘောဒီးယား	ကာဂျစ္စတန်	ကာဇက်စတန်	ကာတာနိုင်ငံ	ကိပ်ဗာဒီ	ကိုကိုးကျွန်း	ကိုလံဘီယာ	ကီရီဘာတီ	ကူဝိတ်	ကေမန်ကျွန်းစု	ကော်စတာရီကာ	ကော်မ္မရိုဇ့်	ကျူးဘား	ကြက်ဆင်	ကွတ်ကျွန်းစု	ကွန်ဂို	ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ	ခရိုအေးရှား	ချက်သမ္မတနိုင်ငံ	ချဒ်	ချီလီ	ဂမ်ဘီယာ	ဂရင်းလန်း	ဂရိတ်ဗြိတိန်	ဂရိနိုင်ငံ	ဂါနာ	ဂါဘွန်	ဂိုင်ယာနာ	ဂီနီ	ဂီနီ	ဂီနီ-ဘီစော	ဂူအမ်ကျွန်း	ဂျပန်	ဂျမေကာ	ဂျာမနီနိုင်ငံ	ဂျီဘရောလ်	ဂျီဘူတီ	ဂျော်ဂျီယာ	ဂွာတီမာလာ	စင်္ကာပူ	စတိုးနီးယား	စပိန်	စဝ် Tome နှင့်ကျောင်းအုပ်ကြီး	စိန့်ကစ်နှင့်နေးဗစ်	စိန့် Helena	စိန့် Pierre နှင့် Miquelon	စိန့်မာတင်-	စိန့်လူစီယာ	စူရီနာမီ	ဆန်မာရီနို	ဆလိုဗေးနီး	ဆာမိုအာ	ဆားဘီးယား	ဆိုက်ပရပ်စ်	ဆိုမာလီယာ	ဆီနီဂေါ	ဆီယာရာလီယွန်	ဆီးရီးယား	ဆူဒန်	ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ	ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ	ဆွာဇီလန်	ဆွီဒင်	ဇင်ဘာဘွေ	ဇမ်ဘီယာ	တန်ဇန်းနီးယား	တရုတ်နိုင်ငံ	တာ့ခ်နှင့် Caicos ကျွန်းစု	တာ့ခ်မင်နစ္စတန်	တိုဂို	တူနီးရှား	တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ	တောင်အာဖရိက	ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို	ထိုင်ဝမ်	ထိုင်းနိုင်ငံတွင်	ဒတ်ဂါစကာ	ဒိန်းမတ်	ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ	ဒိုမီနီကာ	နမီးဘီးယား	နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား	နယူးဂျာစီပြည်နယ်	နယူးဇီလန်	နယ်သာလန်	နိုင်ဂျာ	နိုင်ဂျီးရီးယား	နီကာရာဂွာ	နီပေါ	နီယူးအီး	နော်ဝေ	နေးဒါ	ပနားမား	ပါကစ္စတန်	ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ	ပါရာဂွေး	ပါလက်စတိုင်း	ပိုလန်	ပီရူး	ပေါ်တူဂီ	ပြင်ပတီဘီလူနာများအတွက်	ပြင်သစ်	ပြင်သစ် Polynesia	ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း	ဖင်လန်	ဖာရိုးကျွန်းစု	ဖိလစ်ပိုင်	ဖီဂျီ	ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု	ဗင်နီဇွဲလား	ဗင်နော့တူ	ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ	ဗာတီကန်	ဗီယက်နမ်	ဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို	ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ	ဘယ်လ်ဂျီယမ်	ဘရာဇီး	ဘရူနိုင်း	ဘဟားမား	ဘာဘေးဒိုး	ဘာရိန်း	ဘိုင်ဂျန်	ဘိုလီးဗီးယား	ဘီနင်	ဘီလာရုစ်	ဘူရွန်ဒီ	ဘူလ်ဂေးရီးယား	ဘေလီဇ်	ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား	ဘော့ဆွာနာ	မကာအို	မက္ကစီကို	မလေးရှား	မာကေဒေါနိ	မာတီ	မာရှယ်ကျွန်းစု	မာလာဝီ	မာလီ	မိုဇမ်ဘစ်	မိုနာကို	မောင်းဆာလတ်	မော်ရိုကို	မော်လ်တာ	မော်လ်ဒိုက်ကျွန်းစု	မော်လ်ဒိုဗာ	မြန်မာ	မြောက်ကိုရီးယား	မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများ	မွန်ဂိုလီးယား	မွန်တီနီဂရိုး	ယီမင်	ယူကရိန်း	ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ	ယော်ဒန်မြစ်	ရဝမ်ဒါ	ရိုမေးနီးယား	ရုရှားက	ရှောလမုန်ကျွန်းစု	လစ်ဗျားနိုင်ငံ	လစ်သူ	လတ်ဗီးယား	လာအိုနဲ့	လိုက်တင်ရှတိုင်း	လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ	လိုဗက်ကီးယား	လီဆိုသို	လူဇင်ဘတ်	လူသား၏ပင်လယ်နားမှာနေသော	လေဗနုန်တော	သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ	သြစတြီးယား	သြစတြေးလျ	ဟန်ဂေရီ	ဟေတီ	ဟောင်ကောင်	ဟွန်ဒူးရပ်စ်	အင်ဂိုလာ	အင်ဒိုနီးရှား	အင်ဒိုရာ	အနောက်တိုင်းဆာဟာရ	အဘိဓါန် Tokelau	အဘိဓါန် Tonga	အမေရိကန်ဆာမိုအာ	အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု	အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမိုင်းနာ​​းပြင်ပကျွန်းများ	အယ်လ်ဂျီးရီးယား	အယ်လ်ဘေးနီးယား	အရှေ့တီမော	အာဂျင်တီးနား	အာဖဂန်နစ္စတန်	အာမေးနီးယား	အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု	အိန္ဒိယ	အိုက်စလန်	အိုင်ဗရီကို့စ်	အိုင်ယာလန်	အိုမန်	အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ	အီကွေဒေါ	အီတလီနိုင်ငံ	အီရစ်ထရီးယား	အီရတ်	အီရန်	အီသီယိုးပီး	အဲဂုတ္တုပြည်၌	အဲ့သည့် Mauritius	ဣသရ	ဥဘကျကစ်	ဥရုဂွေး	ဥရောပသမဂ္ဂ